Bahrain-G STAR ADzụ ahịa nwere oke
Gbamgbam nwere ike igbe
Ngosiputa ngwa ngwa tin nwere ike
Ememme ngwugwu tin
Ngwunye ngwugwu nri
Ezinaụlọ ngwugwu tin nwere ike
Gbamgbam Pụrụ Ime Machine
Gbamgbam Pụrụ Ime
Akara Con-Tin na Tin Pụrụ Machines Na-eme kemgbe 2010
ANY SUN hiwere na 2013, anyị bụ ndị ọkachamara soplaya na pụrụ iche na mmepụta nke Taya Mmezi ngwaahịa maka Garage na Mee N'onwe Gị ọrụ. Ndị otu anyị na-ewere Mmụọ nke Obi Ike Iji Nwee Nsogbu, Innovation na Transcend onwe ha, na-agbaso Uru Nwepụta nke inmụta na ịmụba na nchịkọta.
ANY SUN SUNSOUL dabere na nkà ihe ọmụma azụmahịa nke àgwà mbụ na nke kachasị elu, mgbe ọhụụ na mmepe na-aga n'ihu, ndị otu anyị agbatịla site na Taya Valve, Wheel Weight and Tyre Repair Patch, mepụtara dị iche iche ihe okike ihe eji emezi taya, ihe eji eme ihe, Igwe na-adọkpụ na nkwụnye na Auto Repair Tools and Machines. Ọ bụghị naanị na anyị na-akwalite ụdị SUNSOUL, mana na-enyekwa ngwaahịa ndị ahaziri maka ndị ahịa ODM.
ANY SUN mepụta uto uru site na pọtụfoliyo azụmaahịa kwesịrị ekwesị iji hụ na ị ga-enwe ọganiihu. Anyị na-achụso izu oke na ịdị mma. Pụrụ iche ọrụ bụ ntọala nke ụlọ ọrụ ịga nke ọma. Ihe eji mara omenaala anyi site na idi ike, nghọta na nkwanye ugwu. Anyị na-agba ndị ọrụ ume ka ha nwe ma nwee ọnụ ụlọ ọrụ.
ANY SUN nwere nnukwu ekele maka nkwado nke ndị mmekọ anyị niile. Anyị na-ekele ndị otu maka onyinye ha ma chọpụta uru anyị bara na ikpo okwu a. Kwe ka ahụmịhe anyị jeere gị ozi. Ka anyị rụkọta ọrụ iji mezuo nrọ anyị.
Anyị na-eme ma na-enye dị iche iche iche iche nke ígwè nhazi igwe
Na anyị elu technology na ọkachamara otu, anyị na-eto ngwa ngwa.With anyị elu technology na ọkachamara otu, anyị na-eto ngwa ngwa.
Ngwaọrụ igwe anyị na-etinyekarị ebe a. Ihe omumuihe a buru ibu iji nweta otutu puku igwe. Ebe ogbako a bu ihe dika 2000 square.
Mba 322, Yinqiao okporo, Shaoxing, Zhejiang, China